Sidee Qabashada Lead Lead Digital? Martech Zone
Isniin, Oktoobar 24, 2016 Isniin, Oktoobar 24, 2016 Muxamed Yaasiin
Qabashada macdanta "lead" ayaa in muddo ah soo jirtay. Xaqiiq ahaan, waa imisa meheradood oo maareeya ganacsiga GET. Macaamiisha ayaa booqda websaydhkaaga, waxay buuxiyaan foom raadinaya macluumaad, waad ururisaa macluumaadkaas kadibna waad wacdaa. Fudud, sax? Ahh… sidaad u maleyn lahayd ma aha.
Fikradda, nafteeda iyo nafteeda, waa waali fudud. Aragti ahaan, waa inay noqotaa wax fudud in laga xumaado in la soo qabto tilmaamo badan. Nasiib darrose, maahan. In kasta oo ay sahlanaan lahayd inay toban sano ka hor ahayd, haddana macaamiisha waxay aad uga cabsi qabaan inay ka tanaasulaan macluumaadkooda. Qiyaasta ayaa ah inay iyagu (macaamilku) galayaan xogtooda foom (iyagoo ujeedkoodu yahay inay helaan macluumaad) waxaana lagu duqeynayaa wicitaanno taleefan, emayl, qoraallo, waraaqo toos ah iyo wixii la mid ah. In kasta oo tani aysan ahayn kiiska dhammaan ganacsiyada, qaar baa leh oo ku qarxin doona rajooyinka dalabyadan - waana wax aad looga xumaado.
Taas waxaa la yiraahdaa, macaamiil yar iyo kuwa yar ayaa buuxinaya foomamka hogaaminta joogtada ah.
Hadda, markaan dhahayo foomamka hoggaanka ma guurtada ah, waxaan ula jeedaa foomamka gaagaaban ee leh ilaa 4-5 boos ee loogu talagalay macluumaadkaaga xiriirka (magaca, lambarka taleefanka, emaylka, cinwaanka, iwm) iyo laga yaabee qaybta faallooyinka si aad u weydiiso su'aal deg deg ah ama aad u bixiso jawaab celin. Foomamku caadi ahaan ma qaataan tan oo boos ah oo ku yaal bogga (sidaa darteed ma ahan kuwo caan ah), laakiin wax qiimo ah oo la taaban karo kuma siinayaan macaamiisha sidoo kale.
Xaaladaha badankood, macaamiisha ayaa buuxinaya macluumaadkooda si ay macluumaad dheeri ah uga helaan (ganacsiga) goor dambe. In kasta oo aysan jirin wax khaas ah oo khaldan xaaladdan, macluumaadka dheeriga ah ee macaamiisha ay codsadaan waxay ku dhammaanayaan inay noqdaan goob iib ah. Xitaa haddii macaamilku helayo macluumaadka ay codsadeen, waxaa laga yaabaa inaysan rabin in laga iibiyo weli - gaar ahaan haddii ay weli ku jiraan marxaladda cilmi-baarista.
Foomamka hiddo-wadaha 'lead' wali way hareeraysan yihiin, laakiin si dhakhso leh ayey u dhimanayaan si ay ugu suurta gasho habab badan oo isbadal badan oo jiilka hogaanka dhijitaalka ah. Foomamka jiilka hoggaaminta (ama barxadaha halkii) waxay noqonayaan kuwo qafiif ah oo horumarsan si ay ula jaan qaadaan macaamiisha waxay rabaan iyo baahiyahooda - iyagoo macaamiisha siinaya sabab ay ku siiyaan ganacsigaas macluumaadkooda. Waa tan sida qabashada hoggaanka dhijitaalka ahi u kobcayo:
Foomamka Lead Lead waxay noqonayaan “Isdhexgal” iyo “Hawlgal”
Foomamka macdanta "lead" waa uun taas: waa iyagii ma guurto ah. Ma racfaan qaadanayaan; oo si saraaxad leh, waa caajis caajis ah. Haddii ay u muuqato caajis (ama ka xun, uma muuqato mid sharci ah), suurtagalnimada in macaamiisha ay ku buuxiyaan macluumaadkooda ay aad u yar tahay. Kaliya maahan macaamiisha inay u maleynayaan inay wax qabow ama madadaalo ah ay ku soo socdaan (oo haddii wax walba ay dhalaalayaan oo dhalaalayaan, waxaa laga yaabaa inay kaliya tahay), waxay rabaan inay hubiyaan in macluumaadkooda aan loo iibinayn dhinacyada 3aad ama aan loo isticmaalin sharci darro. Waxay rabaan inay ogaadaan in macluumaadku u socdo cidda ay u sheegaan inay u socoto.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ku dhacaya foomamka hogaaminta ayaa ah inay noqdaan kuwo jilicsan, isdhexgal badan oo soo jiidasho leh.
Halkii foom lagu weydiin lahaa macluumaadka xiriirka fudud, su'aalo badan ayaa la weydiinayaa - iyo si looga hortago caajiska, su'aalahan waxaa loo soo bandhigaa siyaabo gaar ah.
Ganacsiyo badan ayaa bilaabay isticmaalka liisaska hoos-u-dhaca, xulashooyin badan, iyo xitaa qoraallo dhab ah oo la buuxiyo si loo hubiyo in macaamilku si joogto ah ugu fiirsanayo iyaga. Intaa waxaa sii dheer, foomamka macdanta 'lead' waxay noqonayaan kuwo si gaar ah loo qaabeyn karo, ganacsataduna hadda waxay awoodaan inay weydiiyaan su'aalo xiisaynaya macaamiisha. Halkii aad ka dareemi lahayd codsi, qaabkan cusub ee la soo saaray wuxuu dareemayaa inuu buuxiyo xog - mid loo diri karo iibiyaha kaas oo ka caawin doona iyaga halkii laga iibin lahaa.
Macaamiisha Waxaa La Siinayaa Qiimo Dhab ah
Haddii aad dib ugu noqoto ugu yaraan shan sano, waxaad u badan tahay inaad xusuusato in inta badan foomka la buuxiyo ay ahaayeen qaabab aad si fudud ku codsan karto macluumaad dheeraad ah. Waxaad ku qori laheyd macluumaadkaaga xiriirka, laga yaabee xoogaa macluumaad doorbid ah, waad garaaci laheyd gudbinta waxaadna sugi laheyd qof kula soo xiriiro. Mararka qaar waxaa lagaa diiwaangelin lahaa joornaal bille ah ama wax la mid ah - laakiin runtii, wax muhiimad ah maahan.
Si dhakhso leh horay usocda shantaas sano, waxaanan hadda ogaaneynaa inagoo wehelineyno foomam aan caadi aheyn oo tagaya, buuxinta foomamka leedhka waxay noqotay wax isdhaafsi badan. Halkii aad ka heli lahayd jawaab sida “Waad ku mahadsan tahay soo gudbinta foomkaaga. Qof ayaa gaari doona waqti yar, ”macaamiisha isla markiiba waxaa loola dhaqmaa dalabyo wax soo saar / adeeg, qiimo dhimis, iyo xaalado badan sida ugu dambeysa, natiijooyinka qiimeynta!
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee soo booqda degellada websaydhadu ay rajaynayaan waa qaadashada su'aalaha iyo buuxinta qiimaynta.
Tusaale wanaagsan oo kani wuxuu noqon karaa "Noocee ah baabuur kugu habboon adiga?" qiimaynta. Kani waa nooc ka mid ah qiimeynta aan arki karno inaan nafteena u fidinayno macaamiisheenna baabuurta ujeeddadeeduna tahay abuurista hoggaan cusub oo iibka baabuurta. Qiimeyntan, macaamilku wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha qaarkood ee ku saabsan doorbidooda iibsashada / wadista baabuurta. Mar alla markay soo gudbiyaan jawaabahooda, natiijooyinkooda isla markiiba ayaa loo sameeyaa iyaga. Si tan loo sameeyo, dabcan, waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macluumaadka xiriirkooda. Haddii macaamilku uu doonayo inuu wax ogaado (oo aan rajeyneyno inay yihiin), waxay ku ridi doonaan emaylkooda, wayna heli doonaan natiijooyinkooda.
Halkii la siin lahaa oo la qaadan lahaa nooca seenyo, foomamka leedhka waxay noqdeen kuwa is dhexgal badan; waxay keeneysaa isweydaarsiga udhaxeeya macaamilka iyo ganacsiga.
Haddii macaamilku buuxiyo "Waa maxay baabuurta kugu habboon adiga?" qiimeyn oo ay yiraahdaan waxay leeyihiin qoys ballaaran, waxaa laga yaabaa inay helaan foojar si ay ugu tijaabiyaan wadista gaari yar oo gaar ah. Ama, si ka sii fiican, waxaa laga yaabaa inay helaan dalab deg deg ah oo ah $ 500 oo laga raaco gaari qoys. Marka ay timaado bixinta qiimaha macaamiisha, fursadaha ayaa ficil ahaan aan dhammaad lahayn.
Iyadoo tikniyoolajiyaddu sida ugu dhakhsaha badan u soo hagaageyso, bixiyeyaasha foomka hoggaanka badan ayaa si otomaatig ah u qaadan kara macluumaadka macaamiisha ay ku galayaan foomka hoggaanka una beddelayaan dalab aad ugu habboon macaamiisha. Foomamka macdanta `` lead '' ma ahan sidii ay ahaan jireen. Waxay u xuubsiibteen wax aad uga weyn waxa suuqleyda badan weligood malayn karaan. Maaddaama tiknoolajiyada qabashada macdanta ay sii wadayso inay sii wanaajiso oo ay is beddesho, magacyadu waxay u baahan yihiin inay horumariyaan geeddi-socodkooda qabashada hoggaanka sidoo kale!
Tags: qiimeynta macaamiishaqabashada hogaanka macmiilkaqabashada leedhka dhijitaalka ahwaxyaabaha la wadaagayowaayo-aragnimo is-dhexgal ahqabashada hogaaminta isdhexgalkaqabashada hogaanka internetkaqabashada hogaanka
Muhammad Yasin waa Agaasimaha Suuqgeynta ee PERQ (www.perq.com), iyo Qoraa la daabacay, oo leh aaminaad adag oo ku saabsan xayeysiinta kanaalka badan ee natiijooyinka ku bixiya iyada oo loo marayo dhexdhexaadin dhaqameed iyo dijitaal ah. Shaqadiisa waxaa loo aqoonsaday heer sare xagga daabacadaha sida INC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb, iyo Buzzfeed. Taariikhdiisa Hawlaha, Ogaanshaha Calaamadaha, iyo Istaraatiijiyadda Suuq-geynta Dijital ah waxay keeneysaa qaab xog wadeen ah oo ku aaddan abuurista iyo dhammaystirka ololeyaasha suuq-geynta suuq-geynta warbaahinta.
Sidee Loo Abuuraa Istaraatiijiyad Suuq Geyn Si Loogu Kordhiyo Meel Marinta Meel Marinta Mobilkaaga?